Ozakwethu be-Africa's Largest Open Data & Civic Technology Network Partner ne-Continental Digital Archive ye-Scientific Research yokunciphisa i-COVID-19 - i-AfricArXiv
Ozakwethu be-Africa's Largest Open Data & Civic Technology Network ne-Continental Digital Archive ye-Scientific Research yokunciphisa i-COVID-19
Kushicilelwe ngu Ikhodi ye-Afrika ne-AfricArXiv on I-3rd April 2020 I-3rd April 2020
NGOKUKHULULEKILE ukusukela ngoMeyi 11, 2020: Ukuphela okuhle ngokubambisana phakathi kweCfA ne-KiaArXiv
Ngemuva kokucubungula ngokucophelela kanye nokuxoxisana ngebhodi, thina njengeAfrikaArXiv sikhethe ukuqeda ukuhlangana kwethu ne-Code for Africa. Sikhetha ukugxila kweminye imisebenzi futhi sibheka ngethemba izinhlelo ezintsha esikhathini esizayo ezingaba nentshisekelo ngokusebenzisana okungenzeka.
I-AfricArxiv ingumlando oholwa ngumphakathi wokuhanjiswa kocwaningo lwe-Afrika. Sinikeza ipulatifomu engenzi inzuzo ukulayisha amaphepha okusebenza, okulungiswayo, imibhalo yesandla eyamukelwe (amaphrinta asemuva), izethulo, kanye namasethi wedatha ngokusebenzisa amapulatifomu esisebenza nawo. I-AfricArxiv inikezelwe ukukhuthaza ucwaningo nokubambisana phakathi kososayensi base-Afrika, ukuthuthukisa ukubonakala kokuphuma kocwaningo lwase-Afrika kanye nokukhulisa ukusebenzisana emhlabeni jikelele.
Silibonga kakhulu i-Code for Africa isikhathi esinikezwe ngaso ukuthi sisebenze nathi.
(Kwabiwe ekuqaleni ku Medium / Code for Africa · Imizuzu engu-5 efundwe)
Ngabe usayizi owodwa ulingana nabo bonke? Ngabe i-Afrika kufanele kanjani, ngezinhlelo zayo ezintekenteke zokunakekelwa kwempilo, izindawo ezigcwele abantu kanye nezomnotho ezinkulu ezingekho emthethweni zisebenzise amasu omhlaba wokulwa ne-COVID-19 ukuqinisekisa ukuthi ziyenzeka noma ziyasebenza endaweni? Abenzi benqubomgomo yase-Afrika nezinhlangano zezempilo zidinga imininingwane esekelwe ebufakazini enomongo oqinile wendawo ukuthola izinqumo ezinolwazi. Kodwa-ke, bathwala kanzima ukuthola idatha yasendaweni noma ukuhlaziya.
Inethiwekhi enkulu kunazo zonke yezwekazi elihlaziya abahlaziyi kanye nabachwepheshe bezomphakathi, Ikhodi Yase-Afrika (CfA), kanye nesizinda esivulekile sedatha yedijithali yocwaningo lwesayensi lwase-Afrika, I-AfricArXiv, ngakho-ke babambisene ukusekela imizamo ye-Afrika yokufika ngaphambi kwejika, ngokusiza indawo yangaphezulu yedatha yendawo kanye nocwaningo lwesayensi lwasekhaya oluthembekile.
Ukubambisana kuzofaka ukuhlaziywa kochwepheshe yi-CfA-esekelwa Takwimu, emnothweni wezepolitiki kanye nemithelela yenqubomgomo yokuthuthuka, futhi kuzothuthukisa ukubambisana kwe-KiaArXiv nemibhalo ehamba phambili emhlabeni jikelele yocwaningo lwesayensi, okuyiwona Uhlaka lweSayensi evulekile (i-OSF), IsayensiOpen futhi UZenodo. Ngokubambisana, abalingani bazo:
Bhala futhi ushicilele imininingwane ethile yasendaweni ese-Afrika kanye nocwaningo lwesayensi ukusiza abahleli baqonde kangcono ukuthi imiphi imiphakathi, ingqalasizinda kanye / noma izinsizakalo ezisengozini enkulu ye-COVID-19, nokuthi yiziphi izindlela ezingasebenza ngempumelelo kakhulu;
Hlahla ulwazi olungelona iqiniso futhi okuwukugcwala okulimaza kakhulu, okuphenduke i-tsunami noma 'ukutheleleka' emithonjeni yezokuxhumana futhi lokhu kufiphalisa imizamo yomphakathi yokulwa ne-COVID-19. Abalingani bazokwenza lokhu ngokubheka ama-memes nezimangalo ezingekho emthethweni, njengengxenye yokubambisana okubanzi kwe-CfA ne-Facebook ne-WhatsApp, ngenkathi kwangaxeshanye bekhulisa amazwi abacwaningi besayensi base-Afrika abathembekile, kanye nokunikeza amandla amagumbi wezindaba ase-Afrika kanye nabaphembeleli bezokuxhumana ukuze balwe nokukhohlakala ngamaqiniso kanye nokugcizelela izindaba;
Xhuma abacwaningi base-Afrika kanye nochwepheshe kwabashintshi kuhulumeni, abezindaba kanye nentuthuko, ukusiza ukuthuthukisa ukuhambisana nokuhambisana kwamasu noma ukungenelela, kanye nokuxhasa inkulumo yeningi esekwe ebufakazini.
Abalingani bazoqala ukubambisana ngokuhlanganisa izinsizakusebenza zabo ukusungula indawo ephakathi yezinsizakusebenza ezinjengezindatshana zocwaningo, imininingwane yedatha kanye nokuchazwa kwemidwebo echazayo, okuthinta ukumaketha okuhlobene kwe-COVID-19 kuzo zonke izindawo ezigciniwe ezigcinwe ezinqolobaneni nasezinqolobaneni eziningi. Amaqembu edatha we-CfA azosiza ukuhlanganisa, ukuguqula kanye nokuvumelanisa izinsiza zedatha, futhi i-AfricArXiv izoxhumanisa amathimba ochwepheshe ukuze ahlaziye izincwadi ngokunemba, ukuhlobana nokusebenziseka, ukusiza ukusiza ukunciphisa "umlilo" wemininingwane evame ukungabi nalutho, ephelelwe yisikhathi noma edukisayo etholakalayo abahleli.
I-AfricArXiv izosebenzisana nezinhlangano zamanye amazwe, njenge Ucwaningo lweDatha Alliance, ukugqugquzela amazinga wedatha afanelekile wokuqondisa izigwegwe okuzoqinisekisa ukuthi idatha yase-Afrika eqoqwe kuma-COVID-19 aligns to FAIR (Kuyatholakala, Kuyatholakala, Kuyasebenziseka, futhi Kuyasebenziseka futhi) kanye ne-CARE (inzuzo ehlanganisiwe, igunya lokulawula, umthwalo wemfanelo, wokuziphatha okuhle) izimiso. Futhi izothuthukisa imihlahlandlela yokuLawulwa kweDatha yokuCwaninga yabacwaningi base-Afrika futhi ixhumanise izinsiza zokuqeqesha kule ndawo. Ekugcineni, i-AfricArXiv izothuthukisa imihlahlandlela yokufaka imibandela yokufaka amadatha / amafomethi wedatha angajwayelekile ukufakwa kumakhodi okufinyelela avulekile.
Lokhu kubambisana kuzofinyelela kwinethiwekhi ye-CfA yezinhlangano zezindaba ezihamba phambili ezingama-50, kanye nezinhlangano ezibanzi zezimboni zabezindaba zase-Afrika, ukukhuthaza inkulumo yomphakathi ebuswa ubufakazi, ngesikhathi esifanayo kukhuphula izinhlelo zokuxhumana zesayensi ezifanayo ezinhlanganweni ezifana neKenya-based Isikhungo Sokuqeqeshwa Kwisayensi Yezokuxhumana (TCC Africa), i I-African Science Initiative (IGhana), iNigeria-based Inethiwekhi ye-African Science Literacy Network futhi I-Vilsquare Isikhungo Sokucwaninga Nentuthuko, kanye nesahluko sase-Afrika esisebenza emhlabeni jikelele Vula i-Hardware Hardware (AfricaOSH) umphakathi.
“Abahleli basebenza ebumnyameni, ngaphandle kwemininingwane yangempela esebenza lapho imiphakathi iba sengozini enkulu khona, noma lapho bangaxhasa khona ingqalasizinda nezinsizakalo zokusekelwa. Lapho kunedatha, kuvame ukuhlukaniswa noma kungaxhunyiwe ku-inthanethi. Sihlose ukusiza ukuyihlanganisa, njengesisetshenziswa somphakathi esitholakala ngokukhululeka, ”kusho isikhulu esiphezulu seCfA, UJustin Arenstein.
"Idatha iyodwa ivame ukungabi nalutho ngaphandle komongo wendawo nezici ezinomthelela kokungafani ngamasiko. Ngakho-ke sisebenzisana ne-CfA ekubhekeni ucwaningo lwesayensi oluchaza i-Afrika kanye nochwepheshe basekhaya ukusiza abahleli bendawo, abacwaningi abazimele kanye nabezindaba baqonda ngokushesha amandla amakhulu anegalelo ekusakazeni leli gciwane, kanye nokuqonda kulokho okungakaze kusebenze ngaphambili nezinye izingqinamba ezifanayo zempilo e-Afrika yonkana, ”kusho u-Obasegun Ayodele, umeluleki we-KiaArXiv kanye neVilsquare CTO.
Ososayensi base-Afrika, kanye nososayensi abengewona ama-Afrika, abasebenza ezihlokweni ezihlobene ngqo nomongo wesifunda sase-Afrika, kunoma isiphi isiyalo, abafuna ukufaka isandla kulolu hlelo bangathumela ucwaningo nolwazi olufanele lwe-COVID-19, kufaka phakathi umsebenzi obukezwe wontanga kulokho okwedlule izifo eziwumshayabhuqe ezinjenge-Ebola, Zika, nezinye izifo eziwumshayabhuqe, njengedokhumenti yombhalo (umbhalo wokuqala, iposta), isethi yedatha, isethulo (i-PDF, i-PPT), iphosta noma i-infographic (PNG, PDF) e info.africarxiv.org/submit/.
Mayelana neKhodi ye-Afrika
Ikhodi ye-Afrika (CfA) iyinethiwekhi enkulu kunazo zonke yezwe lonke yezobuchwepheshe kanye nama-labour journalism, enamaqembu emazweni weqembu. I-CfA yakha izixazululo zentando yeningi yedijithali enikeza izakhamizi ukufinyelela okungagudlulwa emniningwaneni ongazisebenzisa ozinika amandla okwenza izinqumo ezinolwazi, futhi eziqinisa ukubandakanyeka komphakathi ekwenzeni ngcono ukubusa komphakathi kanye nokuziphendulela. Lokhu kufaka phakathi ingqalasizinda yokwakha efana nezindawo ezivulekile kakhulu zezwekazi ezikhona vulaAFAFA futhi umthomboAFRIKA, kanye nokuqalisa imizamo ehlukahlukene njenge umuntu wase-Afrika inethiwekhi, I-PesaCheck uhlelo lokuhlola iqiniso kanye izinzwa.AFRICA inethiwekhi yenzwa yekhwalithi yomoya I-CfA nayo ilawula lokho I-Africa Network yeZikhungo Zokubika Ngophenyo (ANCIR), enikeza izindaba ezinhle kakhulu ezikhona ezwekazini lezwekazi amathuluzi wedatha ye-forensic, ukuphepha kwedijithali futhi ukubhala ngemfihlo okuzwakalayo ukusiza ukuthuthukisa amandla abo okubhekana nabezombusazwe abagwegwile, ubugebengu obuhleliwe kanye nebhizinisi elikhulu lokuphanga. I-CfA nayo iqhuba enye enkulu kunazo zonke e-Afrika ukuthuthukiswa kwamakhono imizamo yezintatheli zedijithali, kanye nokusebenzisana kwezimali zembewu.
CfA Ukuxhumana: sawubona@codeforafrica.org (UJustin Arenstein, uChris Roper, u-Amanda Strydom)
I-AfricArxiv ngumthombo ovulekile, nomthombo ovulekile nomgcini wedijithali oholwa ngumphakathi ocwaningweni lwase-Afrika. Sinikezela ngesiteji esingenzi nzuzo ososayensi base-Afrika ukulayisha amaphepha abo okusebenza, izimiso zokuqala, imibhalo yesandla eyamukelekayo (imibhalo yangaphambilini), namaphepha ashicilelwe. Siphinde sinikeze ngezinketho zokuxhumanisa idatha nekhodi, nokuguqulwa kwama-athikili. I-AfricArxiv ibekelwe ukusheshisa nokuvula ucwaningo kanye nokubambisana phakathi kososayensi base-Afrika nokusiza ekwakheni ikusasa lokuxhumana ngezifundiswa.
Ukuxhumana kwe-KiaArXiv: info@africarxiv.org (UJo havemann, uLouise Bezuidenhout, u-Obasegun Ayodele)
Categories:	UkubambisanaCovid-19Vula iSayensiEzokuxhumana Kwesayensi